အသံကြားရုံနဲ့ ဘယ်သူဆိုတာ တန်းသိနိုင်သည့်အထိ ထူးခြားတဲ့ အသံတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Kpop idol (10) ယောက်
Kpop idol တွေထဲမှာ ရုပ်ဆင်၊ အသံဆင်ကြတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ ခုဖော်ပြမဲ့ idol တွေကတော့ သူများနဲ့မတူတဲ့ အသံကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေပါ။ ဘယ်လောက်တောင် ထူးခြားသလဲဆို အဝေးကနေ ရုပ်မမြင်ဘဲ အသံလှမ်းကြားရုံနဲ့တင် ဘယ်သူဆိုတာ သိသာစေတဲ့ သူတွေပါ။
Hyuna ဟာ သူမရဲ့ အဖွဲ့ဟောင်း 4minute အဖွဲ့လိုက်နဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူမရည်းစား Dawn နဲ့ ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တကိုယ်တော်ဆိုရတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ် အသံကြားရုံနဲ့ Hyuna ဆိုတာ တန်းသိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သူမနဲ့ တွဲဆိုချင်သူ Idol တွေ တန်းစီနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Nayeon ရဲ့ အသံပါဝါအားကောင်းချက်ကို TWICE အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထင်ရှားစွာ ကြားရမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူမရဲ့ အပိုဒ်ကို အထူးတလည်လိုက်ရှာ နားထောင်စရာမလိုဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်။
3. Haechan (NCT)
Haechan အသံလေးဟာ ပေါ့ပါးပြီး powerful ဖြစ်ပါတယ်။ Low note ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် high note ဘဲဖြစ်ဖြစ် ထိအောင်ဆိုနိုင်ပြီး ဒါ့အပြင် တခြား NCT members တိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် harmony ဆိုတတ်ပါသေးတယ်။
Joy ရဲ့ အသံလေးဟာ ပျားရည်လို ချိုမြိန်တာကြောင့်အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်တဲ့အသံပါ။ ဒါကြောင့်လည်း သူမသီချင်းကို နားဆင်ရတိုင်း ပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်ရစမြဲပါ။
Taehyun ရဲ့ အားပြင်းတဲ့ vocal ဟာ ရှားမှရှားပါ။ Ballad သီချင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် upbeat song ဘဲဖြစ်ဖြစ် လိုသလို အသံကစားတတ်တဲ့သူမို့ ထူးခြားနေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
Hyolyn ရဲ့ အသံဟာ အမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေပြီး အသံကာလာ အရမ်းလှပါတယ်။ High note ဘယ်လောက်ဘဲမြင့်မြင့် ရအောင်ဆိုနိုင်တဲ့အပြင် အနိမ့်သံကိုလည်း သေချာဆိုတတ်ပါတယ်။
V ရဲ့ husky voice လေးက တခြား Kpop idol တွေနဲ့ လုံးဝမတူဘဲ ထူးခြားနေတာပါ။ ဒါ့အပြင် အဖွဲ့ထဲမှာလည်း သူတစ်ယောက်တည်း အသံဩဩကို ပိုင်ဆိုင်တာမို့ ပရိတ်သတ်တွေ သူကို မှတ်မိလွယ်ကြတာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။
BLACKPINK အဖွဲ့ရဲ့ main vocalist ဖြစ်သူ Rosé လေးကတော့ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်သာ တွေ့နိုင်မဲ့ အသံပိုင်ရှင်ပါ။ ဘယ်သီချင်းလာလာ ခံစားချက်အပြည့်ထည့်ပြီး သူမရဲ့ own style နဲ့သာ သီဆိုတတ်တာဟာ သူမရဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါဘဲ။
SHINee အဖွဲ့ဝင်တိုင်းလိုလိုဟာ သူများထက်သာလွန်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အသံကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးကလက်ခံထားကြပါတယ်။ Shawol ဘဲဖြစ်ဖြစ် သာမာန် kpop fan ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့သီချင်းတွေကို နားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ Onew လား Jonghyun လား Key လား Minho လား Taemin လား ဆိုတာ အလွယ်တကူခွဲနိုင်ကြပါတယ်။
Baehyun ရဲ့ အသံဟာလည်း Kpop industry ထဲမှာ ရှားတဲ့အသံပါ။ High note တွေ အခက်အခဲမရှိသီဆိုနိုင်သလို သီချင်းအေးအေးလေးတွေကိုလည်း ရင်ထဲထိအောင် သီဆိုနိုင်ပါတယ်။
Next တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ စန္ဒရားတီးတဲ့ကောင်လေး အဖြစ်တွေ့မြင်ရတော့မဲ့ D.O. »
Previous « US ​ကို ​ရောက်ရှိပြီး​နောက် Harry Styles ရဲ့ ရှိုးပွဲမှာ သာယာ​နေခဲ့ကြတဲ့ Bangtan Boys များ